रेललाई न कानुन न कर्मचारी, पुनः भारतमै लगेर राखिने…. – Dainik Sangalo
रेललाई न कानुन न कर्मचारी, पुनः भारतमै लगेर राखिने….
September 19, 2020 230
रेल सञ्चालनका लागि २ सय २६ जना कर्मचारीको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । तर अहिलेसम्म कर्मचारी नियुक्त गरिएको छैन । २६ जना प्राविधिक कर्मचारी भारतबाट ल्याइनेछ । थप १ सय ३० जना कर्मचारीका लागि भदौ २९ मा विज्ञापन गरिएको छ ।
आवश्यकताअनुसार कर्मचारीका लागि विज्ञापन निकाल्दै जाने रेल विभागले जनाएको छ । यता रेलवेसम्बन्धी कानुनसमेत जारी भइसकेको छैन । गत पुसमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस भएको हो ।
जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल चल्नेछ । दुई महिनाभित्र थप १७ किमि दूरीमा रहेको बिजलपुरासम्म रेल पुग्नेछराष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा रेलवेसम्बन्धी विधेयक छलफलका क्रममा रहे पनि संसद् चलेको छैन । जसले गर्दा तुरुन्त विधेयक पास हुने अवस्था छैन । त्यो बेलासम्म अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याएर रेल चलाउने भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले छलफल गरेको थियो ।
अनौपचारिक छलफल भए पनि औपचारिक रूपमा यसको प्रक्रिया अघि नबढेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । रेल चलाउनेसम्बन्धी अध्यादेशबारे मन्त्रालयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी प्रवक्ता लीलादेवी गड्तौला निरौलाले बताइन् । ‘रेलवेसम्बन्धी ऐन संसद्मा छ,’ उनले भनिन्, ‘तर रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश कानुन मन्त्रालयमा आएर अघि बढेकोबारे जानकारी छैन ।’
शुक्रबार आएको रेललाई शनिबार भारततर्फ लगिने नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले बताए । ‘अहिले कर्मचारी भए पनि कोभिडले गर्दा चलाउन सक्ने अवस्था छैन,
अहिले कानुनभन्दा पनि कर्मचारी आवश्यक रहेको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले बताए । ‘कर्मचारीका लागि विज्ञापन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसमा समय लाग्छ ।’ कानुन नहुँदा रेलवेसम्बन्धी कुनै घट ना भए सार्वजनिक अप राधअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘कसैले रेलका सामान चोर्‍यो भने सामान्य कानुनले हुँदैन, कडा कानुन चाहियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले संसद्मा पेस भएको ऐनमा हामीले कडाकडा स जाय र जरिवानाको प्रावधान राखेका छौं ।’
मन्त्री नेम्वाङका अनुसार पहिले पनि नेपालमा रेल चल्थ्यो । यो यातायात संस्थानअन्तर्गत थियो । पछि यसलाई हटाइयो । रेलवे कम्पनी स्थापना गरेर रेल सञ्चालन गरियो । ‘पछि भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभाग गठन भयो,’ नेम्वाङले भने, ‘विभागले रेलको ट्र्याक निर्माण गर्ने, रेलसम्बन्धी अध्ययन गर्ने काम गर्‍यो ।
’ नेपालको रेलवेलाई कसरी अगाडि लैजाने र रेलको क्षेत्र जयनगर–जनकपुर मात्र नभई पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, काठमाडौं–केरुङलगायत क्षेत्रमा बढाउन लागिएको उनले बताए ।
रेल सेट खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको हो । जसमध्ये २० प्रतिशत रकम भुक्तानी
रेल चलाउन नयाँ जनशक्ति नेपालमा उत्पादन नहुँदासम्म भारतबाट कर्मचारी ल्याई करारमा राखिने नेम्वाङले जानकारी दिए । यसका लागि भारतीय सरकारी कम्पनीसँग सम्झौताको काम भइरहेको उनले दाबी गरे । ‘यसका लागि कानुनले बाटो खोलिदिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘टिकट काट्ने, प्रशासन हेर्ने, सुरक्षा गार्डलगायत पदका लागि पनि विज्ञापन गरिसकिएको छ ।’ सबै कर्मचारी अहिले नराख्ने र बिस्तारै थप्दै लगिने उनले बताए । शुक्रबार आएका रेल सेट ६ महिनाअघि नै बने पनि कोभिडका कारण ल्याउन सकिएको थिएन ।
‘गत फागुन ३ देखि चलाउने योजना थियो, कोभिडले गर्दा ल्याउन समस्या भयो,’ मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘हाम्रो अर्डरअनुसार बनेर आएकाले दुवै सेट बुझेका हौं ।’ अहिले यसको परीक्षण सञ्चालन मात्र गरिएको हो । ‘रेल लिगमा कुद्छ, कुद्दैन, अर्डर र सम्झौताअनुसार बनेको छ, छैन, सबै हेरियो,’ उनले भने, ‘तर सर्वसाधारणलाई सेवा दिन सक्ने अवस्था अहिले छैन ।
त्यसैले सुरक्षालाई दृष्टिगत गरी तत्कालका लागि भारत सरकारले जयनगर रेल स्टेसनमा सुरक्षा दिएर राख्नेछ ।’ रेल सेट खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८४ करोड ६५ लाख बजेट छुट्याएको हो । जसमध्ये २० प्रतिशत रकम भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी ८० प्रतिशत रकम केही समयपछि भुक्तानी गरिने रेल विभागले जनाएको छ ।
दुई सेट रेल खरिदका लागि रेल विभाग र भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडबीच ०७६ जेठमा सम्झौता भएको थियो । सबै गरेर जयनगरदेखि बर्दिबाससम्म ६९ किमि रेल नेटवर्क बन्नेछ, जहाँ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जोडिनेछ ।
यो खबर विमल खतिवडाले कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।
Prevचीनको लागि जासुसी गरेको भन्दै भारतले पक्राउ गरेका नेपालीको तस्वीर सार्वजनिक
Nextमजदुरका भाषण गर्नेहरु हराए, तातो भात बाँड्नेहरु खुलामञ्चमै छन्
युवतीलाई ब, ला, त्कार गरी खा, ल्डोमा पु,र्न खोज्ने प्रहरी जवान रुपन्देहीबाट पक्राउ
वामदेव गौतम बालुवाटारमा : प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टी एकता विषयमा छलफल
दुबई का’ण्ड भन्दै यी युवतिको हेर्नै नसकिने ३ मिनेट ४४ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक( भिडियो हेर्नुहोस) (75240)